Tinye akwụkwọ maka họtelu ndi di na Festac, Lagos - Jumia Travel
Festac Town is a relatively new settlement in Lagos State, Nigeria. The town is ...
IHE BANYERE FESTAC
Obodo Festac maranma bu ebe mbara ogige ụlọ nke gọọmenti etiti bu nke atoro ntuala ya na afo 1977 iji nye ndi nsonyere ulo na ihe ememme nke nka na uzu ndi ojii nke abụọ ya nke mba uwa. Nke mbu nke ememe a bu nke emere na mba Dakar, Senegal na afo 1966 tupu Lagos aburu ndi ozo na – esota na ime ya.
Ebe Obibi na Festac
Obodo Festac bu ebe enwere ụlọ obibi kachasị ibu na Nigieria buru nke a na ahuta dị ka nke kacha ukwuu na mba Afrika.
Aha a bu Festac bụ n'ezie aha mkpirikpi ewepụtara site na ememe ihe nka na omenala “Festival of Arts and Culture”. Madu nwere ike I matakwu ihe banyere ihe oma a site na I garu na obodo akụkọ a nke di na okporo ụzọ awara awara Badagry.
Golden Tulip Họtelu nke di na Festac bu otu n’ime Họtelu ndi eji kpakpando ise mara na mpaghara a. Ebe obibi na họtelu ndị ọzọ na Festac ndi dị ka Sunfit Họtelu bu nke enwere ike itinye akwukwo maka onuno ya na Travel.jumia.com.
Usoro Ime Njem
Ime njem na Festac site na akuku obodo ndị ọzọ dị na Lagos bụ site n'okporo ụzọ, ebe uzo ụgbọ okporo ígwè ka bu nke a na aru-aru.
Uzo ụgbọ okporo ígwè njem ohuru a bu maka ijikọta obodo Festac na obodo ebe isi azumahia nke Lagos Island nke ga esi out a wee belata ihe fachi – fachi nke ụgbọala nke okporo ụzọ. Ihe oru mmepe a bu nke dị mkpa nke ukwuu maka mbawanye na onu ogugu mmadu kemgbe afo ndi 1977.
N’ime Festac, ụgbọ “Keke NAPEP” Okpuru ụlọ nke bu ogba tum-tum nwere ukwu ato nke bu usoro ime njem nke oha na eze amama. ụgbọala nta bọs na nke tagzi di kwa ma Keke NAPEP bụ uzo ngwangwa maka ime njem.